Iyo Pordede app (ikozvino Plusdede) inopinda muApp Store | IPhone nhau
Ignatius Room | | IPhone maapplication
Mwedzi mishoma yapfuura, iyo webhusaiti yePordede, inozivikanwa zviri nani se yemahara Netflix vhidhiyo chitoro, akamira kushanda asina kutsanangura chikonzero chekutsakatika kwake, kunyangwe mhosva zhinji yaizove yekubira kwaakatambura mazuva mashoma apfuura. Pakati pemwedzi isati yanyangarika, iyo webhu webhu yakasiya zvakawanda zvekushuvira nekuti kazhinji haina kushanda, zvichimanikidza vashandisi vazhinji kushandisa mamwe mawebhusaiti kunakidzwa neyavanofarira maficha uye mafirimu vasina kubhadhara chero webhu saiti. Kutepfenyura vhidhiyo. Pordede akadzoka masvondo mashoma apfuura aine zita nyowani, Plusdede uye sezvineiwo atora mukana ku verenga chishandiso muApp Store kuti unakirwe nezvose zvirimo.
Sezvatinogona kuona munhoroondo yekushandisa, iyo Plusdede kunyorera kwave kuwanikwa muApp Store kwevhiki, uye kubvira ipapo yakatogashira zvigadziriso zviviri pasina ivo vari mukutarisa kwekuongorora kunosvika kuApp Store, pamwe nemagadziriso avo wanetseka kutarisa kuti kuburikidza nayo tinokwanisa kuwana chero akateedzana uye firimu. Zviripachena kuti ivo vanozove vakavimba nerondedzero yechikumbiro, uko kwatinoziviswa kuti Plusdede chikumbiro chekutarisira nekutarisa kuongorora kwemamuvhi uye nhevedzano yatinoona, kuziva nguva dzese episode ipi kana kuti ndeipi bhaisikopo ratakaona .
Izvo zvinotibvumidzawo kuyera iwo mafirimu uye akateedzana ayo isu atinoteedzera mukuwedzera kune edu ekurumbidza matinoda akateedzana kana mafirimu kune vamwe vashandisi. Asi pamusoro pezvo, zvinotibvumidzawo kunakidzwa nezvose zvirimo papuratifomu zvakanangana ne iPhone yedu kana iPad, tisingatambure nekushambadzwa kunofadza kwewebhu vhezheni. Kuti ushandise Plusdede, dai taive tatova vashandisi vePordede, isu tinongofanirwa kudaro shandisa zita rimwe chete rekushandisa nephasiwedi, saka hatidi kuzonyoresa zvakare.
Imwe yemabhenefiti yatino kupihwa neichi chishandiso kana ichienzaniswa newebhu vhezheni haisi yekungofamba chete, asi zvakare kushambadzira kwakaderera zvakanyanya kupfuura izvo zvatinogona kuwana pawebhusaiti, saka ichave iri yenguva dzose nzira yekushandisa zvemukati kubva kuPordede nyowani. Hatizive kuti ichagara kwenguva yakareba sei muApp Store mushure mekutsikisa ichi chinyorwa, saka usanonoka kurodha pasi isati yanonoka.
Ramba uchifunga kuti ino webhusaiti haina kuchengeta mafirimu kana akateedzanas, zvinongopa zvinongedzo kuti ugone kuzviona, saka zvinogona kunge kuti vamwe vanozomira kushanda, asi uchifunga kuti ibasa remahara uko iwe unokwanisa kuwana zvese zvemukati zvaunoda pasina kubhadhara zvachose chero chinhu, iwe inofanirwa kuve inochinja zvishoma nekushanda kwayo.
Senge sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, vashandisi ve iPhone X havazove nezvichemo kubva ipapo iyo application inotsigira iyo nyowani skrini fomati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo Pordede app (ikozvino Plusdede) inopinda muApp Store
Izvo zvakanaka kwazvo asi zvichine zvikanganiso sekutevera akateedzana kana kuisa bhaisikopo sekumirira kuona ...
Izvo zvakakosha kuti kunze kwekunyoresa, kumisikidza iyo account ... kuti ndakapenga kwechinguva nekuda kwekukanganisa kwangu kukuru! 😉
Kwakanaka kuwana Nacho! Ngatione kuti zvinogara kwenguva yakareba sei muChitoro ...
HughesNet Master Distributor akadaro
Rupi ruzivo rwakanaka uye chinyorwa chakanaka !!
Pasina mubvunzo dzimwe nguva ruzivo urwu runodikanwa, izvo zvinowedzera gakava pamusoro penyaya dzakadai, dzinoenderana. Ini ndinokukoka iwe kuti ushanyire blog yangu nezve Broadband Internet uye zvimwe zvido.
Pindura HughesNet Master Distributor
Disney yekushambadzira sevhisi ichave nemutengo wakaderera pane Netflix
Mukomana wemakore gumi-anokiyinura amai vake iPhone X nekuseka Face ID